कपाल आकर्षक बनाउन यसो गर्नुस् कपालमा तेलको काम चमक बढाउने हो । तेल एक घण्टाभन्दा बढी राखियो भने कपाललाई असर गर्छ । Share
गोरे, हुलाकीमा भन्दा सु च्यामा आनन्द आहाल डाँडामा म बास बसेको घरकी आमाले भनिन्, ‘लु, नानी मेरो छोरोसँग बिहे गरेर जाऊ । छोरा राम्रो छ, इन्जिनियर पढेको । बिहे गरेपछि दुवैजना सँगै बेस क्याम्प जानू ।’ Share
बिस्केट जात्रामा किन हुन्छ ढुङ्गामुढा ? यस्ता छन् पाँच कारण यो जोसको जात्रा हो । तीनतले रथ तान्न तागत चाहिन्छ । तागत निकाल्दा आउने जोसका कारण एकले अर्को व्यक्तिलाई प्रहार गर्ने गरेको अनुभव सुनाउने पनि भेटिन्छन्, भक्तपुरमा । Share
जीवन ‘फूल’ कि ‘फुल’ ? म पनि धेरै ठाउँमा हूस्सु भएको छु, जीवनमा मूर्ख नबन्ने मानिसहरु सफल पनि हुँदैनन् । कहिले सामान किन्दा पसलेले नै हूस्सु बनाउँछ, कहिले आफ्नै सुरमा रहेको बेला आफू नै हूस्सु हुन्छु । Share
कसरी प्रयोग हुँदैछ बृद्धभत्ता ? नेपाल सरकार गृहमन्त्रालय राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका अनुसार ७० बर्ष भन्दा माथिका व्यक्तिहरुलाई जेष्ठ नागरिककोरुपमा घोषित गरेको छ । तर यो नियम कर्णाली र दलित समुदायका व्यक्तिको लागि भने यो नियम लागु हुँदैन । उनीहरुलाई ६० बर्षको उमेरहद तोकिएको छ । Share
कट्टु लगाएर पढाउने सरको ‘सुट’ कहानी मैले विशेष गरी समाजिक सञ्जालमा समय खर्चिन्छु । राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रको लागि पनि सामजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छु । केन्द्रका सहयोगी दाताहरु फेसबुक र ट्वीटरमार्फत जोडिएका छन् । र, मैले गरेको कामको जानकारी पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै दिने गरेको छु । Share
सम्बन्धको तगारो बन्दै सामाजिक सञ्जाल सामाजिक सञ्जालमार्फत टाढा रहेका साथीहरुसँग नजिक भइरहँदा एउटै परिवारमा भएका सदस्यबीच भने दुरी बढेको छ । मानिसहरुको सामाजिक सञ्जालप्रति लत बसिसकेको छ । सामाजिक सञ्जालबिना प्राय मानिसहरुलाई समय बिताउन गाह्रो हुन थालेको छ । Share
कैँचीको कमाइ : एक रुपैयाँका इन्जिनियर बक्सिसका जेठा छोरा अक्रम सलमानीले आईटीमा इन्जिनियरिङ गरेका छन् । कान्छो छोरा किस्मत अली सलमानी जापानमा छन् । आईटीमा इन्जिनियरिङ गर्दै छन्, छात्रवृत्तिमा । बक्सिसले भाइका छोरालाई समेत बीबीएससम्म पढाइदिए । Share
टुडिँखेलमा योग ‘अभिनेता’ बिकाशानन्दका अनुसार संसारभर प्रयोग भइरहेको योग वा योगा मुलतः एउटै हो । तर त्यसको प्रयोग गर्ने शैली भने फरक छ । Share
पूर्वमन्त्री लोकेन्द्र विष्टका ६ किस्सा फोहोर लुगा, साथमा फरुवा दाह्री पालेको हेर्दै फोहोरी । यस्तो धेरै चलिरह्यो । मैलो मान्छे । होटलका साहुजीले तपाईलाई किन मान्छेहरुले मन्त्री भन्दै उडाएका भनेर सोधे । मलाई बडो हाँसो उठ्यो । मैले उहाँलाई म मन्त्री नै हो भने । Share
शिवरात्रिका विकृतिः गाँजा, भाङ र गल्लीका डोरी ‘महादेवले पनि कालकुट विष निलेर पेटमा पुर्याउन सक्ने अबस्था थिएन, उहाँले सो बिषलाई आफ्नो घाटीमै राख्नुभयो, तर बिषले महादेवको घाटी जलाएर निलो बनायो, त्यसैले महादेवलाई निलकण्ठ भन्ने पनि चलन छ,’ शिव पुराण, स्कन्दपुराण जस्ता कथा पुराण उदृत गर्दै गौतमले भने । Share
संसदको क्यान्टिनमा हलाल मासु सांसदहरुका लागि अव नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा सुविधा सम्पन्न चमेना गृह बन्ने भएको छ । जहा पहिलोपटक मुस्लिम समुदायका व्यक्तिले समेत हलाल गरेको खाना पाउँनेछन् । Share
ब्राण्डेड शहर, लोकल रहर नेपाली मात्रै होइन, विदेशी नागरिक पनि नेपालका स्थानीय (लोकल) खाद्यान्न किन्न यसरी जम्मा हुने गरेका छन् । जसरी जुम्लाको स्थानीय मार्सी चामलको चर्चा देशभर फैलियो । Share
शहरमा जेष्ठ नागरिकलाई सास्ती उपत्यकामा बढ्दो सवारी चापसँगै पर्याप्त जेब्राक्रस नहुँदा यात्रुले सास्ती व्यहोर्नु परेको छ । त्रिचन्द्रअघि सास्ती व्यहोेर्ने यी वृद्धा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन । विशेषगरी वृद्धवृद्धाका लागि राजधानीका सडक मनोरोगको साधन बन्दैछन् । Share
महिनावारी, महिला ट्राफिक प्रहरी र सडकका सास्ती महिनावारी हुँदा कति महिलालाई साह्रै पीडा हुन्छ, त्यसैले उनीहरु कार्यालयमा बिदा माग्न सक्छन् । तर महिनावारीको लामो बिदा लिएमा महिलाले अवसर गुमाउन सक्ने महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका प्रमुख वसन्तकुमार पन्त बताउँछन् । Share
‘निभेको आगो हूँ, कसैले ताप्दैन’ हुन त कलाकारलाई राष्ट्रको गहना भनिन्छ । पवन पनि आफ्नो देशमा रहेर कलाकारितामा पहिचान बनाउनु खोज्दै थिए । आफ्नो कलाकौशल मार्फत देश चिनाउने थुप्रै सपनाहरु बुनेका थिए पवनले । तर सपना सबै गर्भमै तुहियो । Share
मैले जीवनमा धेरैलाई प्रेम गरेँः तुलसी दिवस एक जना थिइन् उनले मलाई निकै प्रेम गर्छिन् भन्ने थाहा पाएपछि चाहिँ मैलै उनलाई बोलाएर प्रेम प्रस्ताव राखे । मैले प्रेमका लागि कुनै भ्यालेनटाइन कुरिरहन परेन र न त कुनै प्रकारको गुलाब र चकलेट बाँड्नु पर्यो । Share
विवाहअघि ग्रह होइन सिकलसेल कुण्डली मिलाऊँ सिकलसेल एनिमियाँ एक प्रकारको रक्त अल्पता सम्बन्धि रोग हो । यो समस्या पश्चिम तराईका थारू समुदायमा वंशाणुगत रूपमा स्वास्थ्य समस्याको रूपमा देखापरेको छ । Share
बालविवाहले किशाेरीकाे स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या लम्कीकी धना जैसीको पनि महिनावारी नहुँदै १३ वर्षको उमेरमा विवाह भएको थियो । धना १३ वर्षकी हुँदा उनका श्रीमान् रघुनाथ जैसी १५ वर्षका थिए । विवाह लगत्तै धना गर्भवती भइन् । Share